Soosaarayaasha & Shirkadaha Taangiyada Kaydinta Biyaha - Shiinaha Warshadda Taangiyada Biyaha
Haanta A-1 Barkinta Biyaha Taangiyada waxaa lagu sameeyaa dhar lagu xoojiyay PVC / TPU oo la huwiyay oo muujinaya qaab barkin marka haanta ay buuxdo. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu keydiyo biyaha warshadaha, biyaha dabka, soo ururinta biyaha roobka, biyaha waraabka, biyaha isku qaska shubka, biyaha cagaaran ee dhaadheer, kaydinta biyaha wasakhda ah iyo sibidhida saliida si wanaagsan. Faa'iidooyinkiisa waa: waa la laaban karaa markii la faaruqo, miisaanka oo fudud oo si fudud loo qaadi karo, rakibaadda goobta waa fududaan, nolol dheer iyo kharash yar oo dayactir ah. Aragti ahaan sida loo raaco ...
Hordhac kooban oo badeecad ah Taangiga Biyaha Cilindrical waxaa lagu sameeyaa dhar lagu xoojiyay PVC / TPU oo la huwiyay oo muujinaya qaab cylindrical ah markii taangigu buuxo Waxaa loo isticmaali karaa in lagu keydiyo biyaha warshadaha, biyaha dabka, soo ururinta biyaha roobka, biyaha waraabka, biyaha isku qaska shubka, biyaha cagaaran ee dhaadheer, kaydinta biyaha wasakhda ah iyo sibidhida saliida si wanaagsan. Faa'iidooyinkiisa waa: waa la laaban karaa markii la faaruqo, miisaanka oo fudud oo si fudud loo qaadi karo, rakibaadda goobta waa fududaan, nolol dheer iyo kharash yar oo dayactir ah. S ...
Taangiga basasha ayaa iskiis u istaagi kara. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa beerta kalluunka, ka hortagga dabka, reerka in lagu keydiyo biyaha. Waa dusha sare oo furan oo aan degganeyn, waa mid ku habboon gobolka oomanaha ah.